पहिलो मिस्टर-गेको संसार
Fri, Dec 15, 2017 शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४
नितु घले शुक्रवार, मंसिर १५, २०७४ 9931 पटक पढिएको
किशोर अवस्थामा हेटैाँडाका विश्वराज अधिकारीको पहिचान रेडियो प्रस्तोताको रूपमा हाइहाइ थियो । रेडियोमा सुनिने उनको मीठो आवाजले धेरै युवाको मन छोएको थियो । हाटबजार, चियापसल सबैतिर निस्किँदा उनलाई एउटा मीठो आवाज भएको पुरुषको रूपमा चिन्थे ।
तर, विडम्बना आफ्नो यौनिकता के हो भन्ने कुरामा निकै तड्पिएका थिए विश्वराज त्यतिबेला । किनकि परिवारमा माइला छोराको रूपमा जन्मिएका उनलाई पुरुषप्रति नै आकर्षण हुन्थ्यो । आखिर आफू को हुँ भन्ने दुविधाले उनको अवस्था बिग्रेर गयो । चार वर्षसम्म डिप्रेसनको औषधि खानुपर्‍यो।
तर जब आफूजस्ता व्यक्तिहरू अरू पनि रहेछन् भन्ने थाहा पाए, त्यसपछि उनलाई डिप्रेसनको औषधि चाहिएन । जब उनले रेडियो कार्यक्रम गर्ने सिलसिलामा नीलहिरा समाजले प्रसारण गर्ने तेस्रोलिंगीहरूको बारेमा कार्यक्रम सुने, त्यसपछि आफ्नो यौनिकतामा प्रस्ट भए । भन्छन्, ‘परिचय खुल्नुभन्दा पहिला एक खालको दुविधा सबैमा हुन्छ । त्यो स्टेज निकै भयानक हुन्छ । आफू के हो भन्ने थाहा नपाएपछि धेरै ट्रान्सजेन्डरहरू डिप्रेसन हुन्छ ।’
विश्वराजको हकमा उनी निकै भाग्यमानी साबित भए । १९ वर्षको उमेरमा आफ्नो यौनिकता बुझनु, आफू समलिंगी पुरुष हुँ भन्ने जानकारी पाउनु ठूलो कुरा मान्छन् उनी । उनले भने, ‘कति मान्छेहरू ६० वर्ष पुग्दासम्म आफ्नो यौनिकता थाहा नपाएर तड्पिएर बाँचिरहेका हुन्छन् । मेरा धेरै साथीहरू छन्, जो रात नपरोस् भन्ने चाहन्छन्, किनकि उनीहरू घरमा श्रीमतीसँग रात बिताउन बाध्य हुन्छन् र प्रत्येक रात बलात्कृत भएको महसुस गर्छन् ।’ उनी प्रस्टसाथ भन्छन्, हामी जस्तो देखिन्छौं त्यस्तो होइनौं । पुरुष हौ तर पुरुष नै मन पराउँछौं ।
एक अध्ययनले भन्छ, प्रत्येक १० जनामा एकजना ट्रान्सजेन्डर हुन्छन् । उनको विचारमा जति संख्या देखिएको छ त्यसको दोब्बरले आफ्नो पहिचान लुकाउँछन् । त्यसैले समाजले आफूहरूलाई चाहेअनुसारको वातावरणमा बाँच्ने अवस्था मिलाइदिए हुने जस्तो लाग्छ उनलाई । भन्छन्, ‘हामी महिला र पुरुषभन्दा फरक छौं । म बच्चा जन्माउन सक्छु तर विवाह गर्न सक्दिनँ । त्यो मेरो गल्ती हैन । मेरो इच्छाले यस्तो भएको हैन ।’ तर उनी महिलालाई जीवित भगवान्जस्तो मान्छन् । यतिबेला पार्टनरको साथमा रहेका विश्वराज भन्छन्, ‘समलिंगी विवाहलाई कानुनले चाँडै मान्यता दिन्छ होला । किनकि नेपाल दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये पहिलो राष्ट्र हो, जसले लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गरेको छ ।’
करिब आठ वर्षदेखि तेस्रोलिंगी समुदायका मानवअधिकार, हकहित, पहिचानको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् उनी । ‘नीलहिरा समाज’को शाखा कार्यालयहरू नेपालका ३६ जिल्लामा पुगिसकेको छ । जसले तेस्रोलिंगीका हक, अधिकारबारे काम गर्छ । नेपालको पहिलो गे सभासद् सुनीलबाबु पन्तको योगदानले नीलहिरा समाजको स्थापना भएको हो । अहिले तेस्रोलिंगीहरू आफ्नै पहिचानले नागरिकता पनि बनाइरहेका छन् ।
सन् २०१३ मा नेपालमा ‘पहिलो गे ह्यान्डसम प्रतियोगिता’ भएको थियो । नेपालभरिका ३५ जना समलिंगी पुरुषहरू सहभागी रहेकोमा विश्वराज अधिकारी पहिलो मिस्टर गे भए । अहिले सन् २०१७ डिसेम्बर २१ मा हुन गइरहेको दोस्रो गे प्रतियोगिता सफल पार्न उनी लागिपरेका छन् ।
उनी गे ह्यान्डसम प्रतियोगिता हुनुभन्दा ठीक अघिल्लो दिनमात्रै समलिंगी पुरुषको रूपमा घरमा खुलेका थिए । यो कुरा परिवारले सजिलै स्वीकार गरेकोमा भाग्यमानी महसुस गरेको बताउँछन् । उनले घरमा भेदभाव सहनु परेन। अर्को मिस्टर गे को आगमनले समाजमा तेस्रोलिंगी समुदायमा काम गर्न सहज हुने अधिकारीको अनुभव छ ।
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४ ‘प्राङ्क भिडियो’ भद्दा मजाक
शनिवार, मंसिर २३, २०७४ कीर्तिपुरमा खिँ, टाँ र दाफा
शनिवार, मंसिर २३, २०७४ नउड्ने जहाजका एयरहोस्टेज
शनिवार, मंसिर १६, २०७४ ड्रग्स, सेक्स र ड्रिङ्स
शुक्रवार, मंसिर १५, २०७४ नेपाली संगीत म्युजिक एरेन्जरको काँधमा
शुक्रवार, मंसिर १५, २०७४ कम्युन होटेल : नेवा लहना
शुक्रवार, मंसिर १५, २०७४ सिर्जनामा रमाएकी पुष्पा
शुक्रवार, मंसिर १५, २०७४ किशोरीको गुनासो: ‘हामीलाई बुझ्दैनन्’
हालसम्म विजयी र अग्रताको ताजा अपडेट
पेट्रोल, डिजेल, ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि : मध्यरातदेखि लागु हुने
'पहिले अध्यादेश अनि पद त्याग' 10281
उम्मेदवारले पाएको भन्दा बदर मत बढी 1303
सशस्त्रमा एपीसी खरिदमा किचलो, शान्ति मिसन गुम्ने खतरा 18071
संवैधानिक अस्पष्टता : प्रधानमन्त्री पहिले कि संसद् बैठक ? 2821
बाबुरामलार्इ ‘माओवादीकै भोट' 20238
किरण र पृथ्वीसुब्बाले थाले मुख्यमन्त्रीको कसरत 5437
कांग्रेस नेतृत्वको असफलता 2268
वाम सफलताका कारण 2077
विवाह : मागी कि भागी 2352
हिँडेरै ७७ जिल्ला पुग्ने शरदको योजना 588
चार सय सरुवामा छानबिन 963
गौचन हत्या प्रकरण : मदिराको लतले समातिए हतियार कारोबारी 7030
अख्तियारको सुझाव सरकारले मान्नुपर्छ : राष्ट्रपति 657
गौचन हत्या प्रकरण : समातिए हतियार कारोबारी 1755
नक्कली नागरिकता बनाउने गिरोह पक्राउ 2487
मोबाइल टावर निर्माणमा विदेशी कम्पनीको रुचि 1844
टेलिकम अपरेटरको आम्दानी घट्यो 1444
प्रतिस्पर्धाले सस्तो बन्दै भ्वाइस कल सेवा 18533
फोनकल प्रतिमिनेट ३०१ रुपैयाँ ! 11579
फोरजी सेवामा ‘प्राइस वार’ 6957
एक महिनासम्‍म एनालगबाटै टिभी प्रसारण गर्न दिने मन्त्रालयको निर्णय 6969